ECG iri kuuya kuApple Watch inoenderana muJapan munguva pfupi iri kutevera | Ndinobva mac
ECG iri kuuya kuApple Watch inoenderana muJapan munguva pfupi iri kutevera
Zvekare isu tinofanirwa kutaura nezve ECG mashandiro eApple Watch uye zvinoita sekunge iyo Cupertino kambani yatove nemvumo dzose dzinodiwa uye mvumo dzese dzevatongi veJapan kuitira kuti igone kushandiswa mumazuva anotevera (kana masvondo) pane yakatsigirwa zvishandiso. Mune ino kesi Ndiyo Apple Watch Series 4 uye Series 5.
Zvinotaridza kuti chishandiso chekuita maECG eApple smart watches chakatora nguva yakareba kuti chibvumidzwe munyika uye zviri izvo maererano neiyo iPhone Mania media, Kubvumidzwa kwevatongi veJapan kwakawanikwa neChishanu, Gunyana 4.
Matambudziko nemitemo yenyika imwe neimwe
Uye ndezvekuti chishandiso ichi chikuru chakatora nguva yakati rebei kupfuura zvaitarisirwa kuvhurwa mune dzimwe nyika dziri kunze kweUnited States. Mitemo yehutsanana yenyika yega yega yakasiyana uye izvi zvinoratidzwa nekutenderwa kwemidziyo iyi mune yega yenyika dziripo, dzimwe dzakatora nguva yakati rebei, dzakaita seJapan, dzichiri dzisina basa. Mune ino kesi inofanirwa kujekeswa kuti Japan ichave iri nyika yekupedzisira kumisikidza iro basa kune vashandisi vayo sezvo South Korea neBrazil vakagamuchira mvumo yekushandisa iyo ECG Nyamavhuvhu apfuura.
Chero zvazvingaitika, zvinoita sekunge chiyero ichi chekuyera chichavepo munyika munyika inoenderana neApple Watch. Icho chokwadi ndechekuti vezvenhau vanotsanangura kuti kuvhurwa uku kungave kuri padhuze sezvo paine kutaura kwekugona kwekuti vashandisi vanayo vanoshanda vasati vatombogamuchira yepamutemo vhezheni yeWOSOS 7.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » ECG iri kuuya kuApple Watch inoenderana muJapan munguva pfupi iri kutevera
Logitech Pro X Wireless. Paunosimudzira mahedhifoni aive atove kushamisa.
Grey, mutambo wakasiyana uyo unotikoka kuti timbozorora uye tifunge